ADOBE PREMIERE PRO ကိုတစ်ဦးကဗီဒီယိုကိုချုံ့ဖို့ကိုဘယ်လို - ADOBE PREMIERE PRO ကို - 2019
Adobe Premiere Pro ကိုနီးပါးတိုင်းကိုဗီဒီယိုအပြောင်းအလဲနဲ့, ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဟာယေဘုယျအားပရိသတ်၌အတူတကွသူတို့ကိုချိတ်ဆက်ဖို့, တစ်ဗီဒီယိုအပိုင်းအထဲကဖြတ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။ ဤအစီအစဉ်အတွက်ကြောင့်ခက်ခဲများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏တန်ခိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ငါအရာအားလုံးလုပ်ဖို့ဘယ်လိုပိုပြီးစဉ်းစားရန်အဆိုတင်သွင်း။
ဗီဒီယို၏မလိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုချုံ့ရန်အလို့ငှာ, ဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက်အထူး tool ကို select လုပ်ပါ «သင်တုန်း Tool ကို»။ ကျွန်ုပ်တို့သည် panel ကိုအပေါ်နိုင်ပါက Find « Tools များ»လက်ျာရာအရပျ၌သူတို့ကို .Kliknem နှင့်ဗီဒီယိုနှစ်ခုအတွက်ဖြတ်သည်။
အခုတော့ကျွန်တော်တစ်ဦး tool ကိုလိုအပ်တယ် "အထီးကျန်ထားခြင်း" (ရွေးချယ်ရေး Tool ကို) ။ ဒီ tool ကသငျသညျကိုဖယ်ရှားလိုအစိတ်အပိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ ထိုအကိုကလစ်နှိပ်ပါ «ဖျက်ပစ်ပါ».
သို့သော်ထိုသို့အစဉ်အမြဲအစအဦးသို့မဟုတ်အဆုံးဖယ်ရှားပစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ မကြာခဏသင်ကဗီဒီယိုတစ်လျှောက်လုံးကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကသာတစ်ဦးတူရိယာနီးပါးတူညီအမှုကိုပြု «သင်တုန်း Tool ကို» ကျွန်ုပ်တို့သည်အပိုင်း၏အစနှင့်အဆုံးကိုခွဲခြားသတ်မှတ်။
tool တစ်ခု "အထီးကျန်ထားခြင်း" လိုချင်သောဖြတ်ကို select နှင့်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
တံစဉ်များကိုပြီးနောက်ကျန်ကြွင်းသောသူတို့ကိုပျက်ပြယ်, ငါတို့ပဲတပြင်လုံးကိုဗီဒီယိုက shift နဲ့ရယူပါ။
ဒါဟာဖြစ်သကဲ့သို့ left ဒါမှမဟုတ်တချို့စိတ်ဝင်စားဖို့အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ဗီဒီယိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မြားကိုပွငျဆငျနိုငျသညျ။ သင်၏စီမံကိန်းမီးမောင်းထိုးပြ «အချိန်လိုင်း»။ menu ကိုသွားပါ «ဖိုင်မှတ်တမ်း-ပို့ကုန်-Media ကို»။ ပြတင်းပေါက်၏လက်ဝဲအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာတော့တစ်ဦး tab ကိုလည်းမရှိ «ရင်းမြစ်»။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကဗီဒီယိုဖြတ်နိုင်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ရိုးရိုးညာဘက်သောနေရာများအတွက်လျှောတက်တွန်းအားပေး။
သီးနှံအိုင်ကွန်၏ထိပ်ကိုနှိပ်, ငါတို့ဗီဒီယိုအရှည်ကိုချုံ့, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ width ကိုငျနိုငျမသာ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အထူး tab ကို adjust ။
အိမ်နီးချင်း tab မှာ « Output » ရှင်းလင်းစွာကဖြတ်တောက်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမြင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ဒါဟာမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးကိုရွေးချယ်ဧရိယာ၏ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့တံစဉ်များကိုခေါ်တော်မူနိုင်ပါသည်သော်လည်း။
ဤကွီးစှာသော program တစ်ခုနှင့်တကွသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူမိနစ်ရုပ်ရှင်စုဝေးနိုင်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: LEARN PREMIERE PRO IN 20 MINUTES ! - Tutorial For Beginners (သြဂုတ်လ 2019).